We should always remember that progress in Buddhism is gradual:amatter of step by step practice, gradual progress, and gradual achievement. This is like the growth of an oak tree, not the blooming ofaflower. A flower blossoms overnight, lasts forafew days, and then it withers and dies. An oak tree grows slowly and gradually, so slowly that day after day you don’t see it growing at all. But after several years, the oak tree has become tall and majestic, rooted immovably in the ground, able to endure for centuries. This is the kind of spiritual development we should aim at in our practice of Buddhism.
A talk given at the Chinese New Year assembly at Bodhi Monastery, February 9th, 2008
Don't be so formal
Formal ကို အရမ်းမြတ်နိုးတယ်
Formal ကျကျ သေမယ့် မသာတွေ
ဘလော့ဂ်က တမ်းပလိတ်လည်း ရွဲ့ စောင်းနေတာပဲ။ မဝင်တာကြာတော့ သူစိမ်းပြင်ပြင်တောင် ကြည့်နေတယ်။ စာမေးပွဲတစ်ခု ရှိသေးတယ်။ စာမေးပွဲပြီးမှပဲ အပြတ်ပြန်ရွှိုင်းတော့မယ်။ တွေ့ကရာ တမ်းပလိတ်တစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေသလို တင်ထားရတယ်။ အလုပ်တွေ စာတွေကိစ္စ မြန်မြန်ပြီးမှပါပဲ။
ဘလော့ဂ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ခရီးတွေများပြီး အလုပ်တွေများနေတာနဲ့။ ပြန်ပြီး အသက်သွင်းရဦးမယ်။ တခြားသူတွေရဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို ဂူဂယ်လ်ရီဒါနဲ့ ဖတ်တယ်။ ကိုယ့်ဖာသာပဲ မရေးဖြစ်တာ။
Published by KhunMoung9comments
Idle foralong time